COVID-19 ကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူတချို့ကို စတင်အရေးယူ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ဒေသတွေမှာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးလုပ်လာတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါမယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ လူစုလူဝေးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုပြီး ခရစ္စယာန်တရားဟောဆရာအချို့နဲ့ လူစုလူဝေးလုပ်ဆောင်သူတွေကို တိုင်းအစိုးရကနေ အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်။ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အသီးသီးမှာလည်း ဒီရောဂါမကူးစက်နိုင်ဖို့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် ကန့်သတ်အရေးယူမှုတွေ တိုးလုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက်မေခက တင်ပြပေးထားတာပါ။
ကိုရိုနာပိုး ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ အတွက် လူစုလူဝေးပြုလုပ်တာကို ကန့်သတ်ထားပေမယ့် လိုက်နာမှုမရှိခဲ့တာမို့ စောဒေးဗစ်(ခ)စောဒေးဗစ်လား နဲ့ ဦးဝေထွန်း (နဝရတ် တေးသံသွင်း)တို့ကို မရမ်းကုန်း မြို့မရဲစခန်း မှာလည်းကောင်း၊ ဦးစောကွယ်ဝါး(သင်းအုပ်ဆရာ)နဲ့ အမှုတော်ဆောင်ဦးစောရေဂန်ဒီ အင်းစိန် မြို့မရဲစခန်း မှာလည်းကောင်း သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေနဲ့ အသီးသီး အမှုဖွင့်ထားပြီလို့ ရန်ကုန် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောပါတယ်။
"အဓိကကတော့ လူစုလူဝေးပေါ့။ မလိုက်နာဘဲ လုပ်တော့ ဒီမှာ ပိုးတွေ တွေ့ကုန်တော့ အကုန် အခက်အခဲတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ ဒီလိုနောက်မဖြစ်အောင် ဟန့်တားတဲ့ အနေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေ လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနဲ့ အရေးယူတာက ဒေသနရ နဲ့အရေးယူတာနဲ့မတူဘူး။ ကျနော်တို့က Lock Down ဆိုပြီး ၁၈၈၊ ၁၄၄ ထုတ်ပြီးယူတာ။ အခုကကျတော့ ဒီရောဂါပိုးကူးစေလို့ နောက်ဒီပိုးနဲ့ပတ်သတ်လို့ မကူးစက်အောင် လုပ်ဆောင်တာကို မလိုက်နာလို့ အခုလိုဒီဥပဒေနဲ့ အရေးယူတာပါ။"
COVID-19 ရောဂါ တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းအပါအ၀င် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ ဒေသအစိုးရအသီးသီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လအကုန်နဲ့ ဒီလဆန်းတွေမှာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ၁၄၄၊ ပုဒ်မ ၁၈၈ ဆိုတဲ့ ဒေသန္တရအမိန့်တွေနဲ့ တားမြစ်မိန့်တွေ ထုတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ သင်္ကြန်ကာလ ပွဲတော်တွေ မလုပ်ဖို့အပြင်၊ လူစုလူဝေးနဲ့လုပ်ဆောင်တာမှန်သမျှကို ကန့်သတ်တားမြစ်ထားတာပါ။ ခရယာန်ဘာသာရေး အခမ်းအနားတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ဒီဒေသန္တအမိန့်နဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဦးနိုင်ငံလင်းကပြောပါတယ်။
အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာမျိုး မဖြစ်အောင် ဒီ အမိန့်တွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောပါတယ်။
"အဓိကကတော့လေ ကျနော်တို့မှာ ထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိတယ်။ ဒီ ဟုမ်းကွာရန်တင်းနေရင်ဘယ်လို၊ နောက်လူစုလူဝေးလုပ်ဆောင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။ အခုဆို ၆၂ ယောက်တွေ့ထားတယ်။ နောက်ဆုံးတွေ့တာက လူအစုလိုက် အပြုံလိုက် ပိုများတဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ ရှိတာကလည်း ကျနော်တို့ ထုတ်ပြန်ထားတာ၊ အဓိကကတော့ ကျန်းမာရေးဘက်ကထုတ် ပြန်ထားတာတွေကိုမလိုက်နာလို့ဖြစ်လာရတယ်လို့ ယူဆတယ်။ အဲတော့ ပြည်သူကို အဲလိုမလုပ်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။"
သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ အရ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ထက် မပိုသော ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ၃၀ (က) အရ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက တနှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ အတိအကျပြဌာန်းထားပါတယ်။
အရေးယူခံရသူ တရားဟောဆရာ ဦးဆောင်တဲ့ ဟောပြောပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သူတွေထဲ ဧပြီ ၁၂ ရက်နဲ့ ၁၃ ရက် ကျန်းမာရေးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ ၅ ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့မှာလည်း ပိုးတွေ့လူနာတွေ ထပ်မံ တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့က ပိုးတွေ့လူနာ ၂၁ ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိတဲ့ထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက အများဆုံး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးက တစ်ဦးပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုအချိန်အမထိ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုမှာ တစ်ရက်အတွင်းအများဆုံး တွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် တိုင်း အလိုက် ကန့်သတ်မှုတွေနဲ့ တားဆီးတာတွေ လုပ်ဆောင်နေတာမျိုးတွေ ရှိတာမှာ ရန်ကုန်နဲ့ နီးကပ်တဲ့ ပဲခူး တိုင်းမှာတော့ ရန်ကုန်ဘက်က လာတဲ့ ကားတွေ၊ လူ အဝင်အထွက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကန့်သတ်မှု တချို့လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီး ဦးညွှန့်ရွှေက ဗွီအိုအေ ကိုခုလိုပြောပြပါတယ်။
"ပဲခူးကရန်ကုန်နဲ့လည်းအရမ်းနီးတယ်။ အသွားအလာ ကူးလူးတာလည်းများတယ်၊ အဲတော့ဝင်တာထွက်တာကို စီစစ်ဖို့ကလိုနေပြီပေါ့. အဲတော့ ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်ဖို့တော့ အစိုးရကိုပြောထားတယ်။ အရေးကြီးတာက ပြန်လာတဲ့ ကားတွေဆေးဖြန်းတာ၊ ပြန်လာတဲ့ သူတွေကို ကားဂိတ်တွေမှာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ လုပ်တာမျိုးတွေ လုပ်သွားဖို့ စီစဉ်မှာပါ။"
ဒီပြင် အစိုးရရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်မှာလည်း အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေ အားလုံးမှာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ နေပြည်တော်ကို ဝင်ထွက်ဂိတ် ၅ နေရာဖြစ်တဲ့ နေပြည်တော် အမြန်လမ်းတိုးဂိတ် (မိုင် ၂၀၀)၊ တောင်ညိုအမြန်လမ်းတိုးဂိတ်၊ သာဝတ္ထိဂိတ်၊ တပ်ကုန်းဂိတ်နဲ့ တပ်ကုန်း-ကင်းသာ ပင်လောင်း လမ်းခွဲဂိတ်တွေမှာ စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီး ဝင်ထွက်သူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ကောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာတော့ ကိုရိုနာပိုး ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ ဧပြီ ၁၃ ရက် ကစလို့ တိုင်းအစိုးရက ညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါက ကိုဗစ် ရောဂါမပြန့်ပွားနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်တာဖြစ်သလို နောက် ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ မရှိအောင်လို့ ရည်ရွယ်တာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦး မိုးကျော်သူကပြောပါတယ်။
"လက်ရှိက ည၁၀နာရီကနေ မနက် ၄ နာရီထိကို မထွက်ရဆိုတာက ဒုစရိုက်သမားတွေ အတွက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်အတွက် ရည်ရွယ်တာလည်းပါတယ်။ ဆက်စပ်နေတယ်။ ကိုဗစ်ကို အသုံးချပြီးဒူစရိုက်တွေလုပ်လာ နိုင်တယ်။ ဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်တာမို့ စောစောထိန်းတဲ့ သဘောပါ။"
မြို့ဝင် မြို့ထွက်တွေမှာ စစ်ဆေးမယ်၊ တခြားဒေသကနေ ဝင်ရောက်လာရင် မေးမြန်းပြီး နေရပ်လိပ်စာ တောင်းယူမယ်လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။တိုင်းအတွင်းက ၁၄ ရက် စောင့်ကြည့်စခန်းမှာ နေထိုင်သူတချို့ စည်းကမ်းမလိုက်နာလို့ ထောင်ချအရေးယူတာ ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။
တိုင်းအစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို မလိုက်နာဘူးဆိုရင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဥပဒေနဲ့ အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း လုံခြုံရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး က လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။
COVID-19 ကာကှယျရေး စညျးကမျးခြိုးဖောကျသူတခြို့ကို စတငျအရေးယူ
COVID-19 ရောဂါပွနျ့ပှားမှု တားဆီးကာကှယျရေးအတှကျ တိုငျးနဲ့ပွညျနယျအလိုကျဒသေတှမှော အရေးယူဆောငျရှကျမှုတှေ တိုးလုပျလာတဲ့အကွောငျး ပွောပွပါမယျ။
ရနျကုနျတိုငျးအတှငျးမှာ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားစနေိုငျတဲ့ လူစုလူဝေးပွုလုပျဆောငျရှကျခဲ့တဲ့အတှကျဆိုပွီး ခရစ်စယာနျတရားဟောဆရာအခြို့နဲ့ လူစုလူဝေးလုပျဆောငျသူတှကေို တိုငျးအစိုးရကနေ အမှုဖှငျ့အရေးယူထားပါတယျ။ တိုငျးနဲ့ ပွညျနယျအသီးသီးမှာလညျး ဒီရောဂါမကူးစကျနိုငျဖို့ အတှကျ သကျဆိုငျရာတိုငျးနဲ့ ပွညျနယျအလိုကျ ကနျ့သတျအရေးယူမှုတှေ တိုးလုပျလိုကျပါတယျ။ ဗှီအိုအေ သတငျးထောကျမခေက တငျပွပေးထားတာပါ။
ကိုရိုနာပိုး ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုကို ကာကှယျထိနျးခြုပျဖို့ အတှကျ လူစုလူဝေးပွုလုပျတာကို ကနျ့သတျထားပမေယျ့ လိုကျနာမှုမရှိခဲ့တာမို့ စောဒေးဗဈ(ခ)စောဒေးဗဈလား နဲ့ ဦးဝထှေနျး (နဝရတျ တေးသံသှငျး)တို့ကို မရမျးကုနျး မွို့မရဲစခနျး မှာလညျးကောငျး၊ ဦးစောကှယျဝါး(သငျးအုပျဆရာ)နဲ့ အမှုတျောဆောငျဦးစောရဂေနျဒီ အငျးစိနျ မွို့မရဲစခနျး မှာလညျးကောငျး သဘာဝဘေး အန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒနေဲ့ အသီးသီး အမှုဖှငျ့ထားပွီလို့ ရနျကုနျ တိုငျးအစိုးရအဖှဲ့ လူမှုရေးဝနျကွီး ဦးနိုငျငံလငျးက ပွောပါတယျ။
"အဓိကကတော့ လူစုလူဝေးပေါ့။ မလိုကျနာဘဲ လုပျတော့ ဒီမှာ ပိုးတှေ တှကေု့နျတော့ အကုနျ အခကျအခဲတှဖွေဈကုနျတာပေါ့နျော။ အစုလိုကျအပွုံလိုကျတှေ ဖွဈကုနျတာပေါ့။ ဒီလိုနောကျမဖွဈအောငျ ဟနျ့တားတဲ့ အနနေဲ့ အရေးယူဆောငျရှကျတာတှေ လုပျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီသဘာဝပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာနဲ့ အရေးယူတာက ဒသေနရ နဲ့အရေးယူတာနဲ့မတူဘူး။ ကနြျောတို့က Lock Down ဆိုပွီး ၁၈၈၊ ၁၄၄ ထုတျပွီးယူတာ။ အခုကကတြော့ ဒီရောဂါပိုးကူးစလေို့ နောကျဒီပိုးနဲ့ပတျသတျလို့ မကူးစကျအောငျ လုပျဆောငျတာကို မလိုကျနာလို့ အခုလိုဒီဥပဒနေဲ့ အရေးယူတာပါ။"
COVID-19 ရောဂါ တားဆီးကာကှယျရေးအတှကျ ရနျကုနျတိုငျးအပါအဝငျ တိုငျးနဲ့ပွညျနယျတှမှော ဒသေအစိုးရအသီးသီးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့လအကုနျနဲ့ ဒီလဆနျးတှမှော ပွဈမှုဆိုငျရာကငျြ့ထုံးဥပဒေ ပုဒျမ၁၄၄၊ ပုဒျမ ၁၈၈ ဆိုတဲ့ ဒသေန်တရအမိနျ့တှနေဲ့ တားမွဈမိနျ့တှေ ထုတျထားပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာ သင်ျကွနျကာလ ပှဲတျောတှေ မလုပျဖို့အပွငျ၊ လူစုလူဝေးနဲ့လုပျဆောငျတာမှနျသမြှကို ကနျ့သတျတားမွဈထားတာပါ။ ခရယာနျဘာသာရေး အခမျးအနားတှကေို ပွုလုပျခဲ့တဲ့အပျေါမှာ ဒီဒသေန်တအမိနျ့နဲ့ အရေးယူဆောငျရှကျတာဖွဈတယျလို့ ဦးနိုငျငံလငျးကပွောပါတယျ။
အစုလိုကျ အပွုံလိုကျ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရတာမြိုး မဖွဈအောငျ ဒီ အမိနျ့တှေ ထုတျပွနျခဲ့တာဖွဈတယျလို့လညျး ရနျကုနျတိုငျးဝနျကွီး ဦးနိုငျငံလငျးက ပွောပါတယျ။
"အဓိကကတော့လေ ကနြျောတို့မှာ ထုတျပွနျခကျြတှရှေိတယျ။ ဒီ ဟုမျးကှာရနျတငျးနရေငျဘယျလို၊ နောကျလူစုလူဝေးလုပျဆောငျရငျဘယျလိုလုပျရမယျဆိုတာမြိုးတှေ ထုတျပွနျထားတာရှိပါတယျ။ အခုဆို ၆၂ ယောကျတှထေ့ားတယျ။ နောကျဆုံးတှတေ့ာက လူအစုလိုကျ အပွုံလိုကျ ပိုမြားတဲ့ အနအေထားရှိတယျ။ ရှိတာကလညျး ကနြျောတို့ ထုတျပွနျထားတာ၊ အဓိကကတော့ ကနျြးမာရေးဘကျကထုတျ ပွနျထားတာတှကေိုမလိုကျနာလို့ဖွဈလာရတယျလို့ ယူဆတယျ။ အဲတော့ ပွညျသူကို အဲလိုမလုပျဖို့ ပွောခငျြပါတယျ။"
သဘာဝဘေး အန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဆိုငျရာဥပဒပေုဒျမ ၂၅ အရ ပွဈမှုထငျရှားပါက ထောငျဒဏျ ၃ နှဈထကျ မပိုသော ပွဈဒဏျနဲ့ ၃၀ (က) အရ ပွဈမှုထငျရှားပါက တနှဈထကျ မပိုသော ထောငျဒဏျဖွဈစေ၊ ငှဒေဏျဖွဈစေ၊ ဒဏျနှဈရပျလုံးဖွဈစေ ခမြှတျနိုငျတယျလို့ အတိအကပြွဌာနျးထားပါတယျ။
အရေးယူခံရသူ တရားဟောဆရာ ဦးဆောငျတဲ့ ဟောပွောပှဲကို တကျရောကျခဲ့သူတှထေဲ ဧပွီ ၁၂ ရကျနဲ့ ၁၃ ရကျ ကနျြးမာရေးဌာန ထုတျပွနျခကျြတှအေရ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရသူ ၅ ဦးတှရှေိ့ခဲ့ပွီး၊ ဧပွီ ၁၄ ရကျနမှေ့ာလညျး ပိုးတှလေူ့နာတှေ ထပျမံ တှရှေိ့ ခဲ့ပါတယျ။ ဧပွီ ၁၃ ရကျနကေ့ ပိုးတှလေူ့နာ ၂၁ ဦး ထပျမံတှရှေိ့တဲ့ထဲမှာ ရနျကုနျတိုငျးအတှငျးက အမြားဆုံး တှရှေိ့ခဲ့ပွီး မကှေးတိုငျးဒသေကွီးက တဈဦးပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာမွနျမာနိုငျငံမှာ အခုအခြိနျအမထိ ရောဂါပိုးတှရှေိ့မှုမှာ တဈရကျအတှငျးအမြားဆုံး တှရေ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာ တိုငျးနဲ့ ပွညျနယျအလိုကျ COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေးအတှကျ သကျဆိုငျရာ ပွညျနယျ တိုငျး အလိုကျ ကနျ့သတျမှုတှနေဲ့ တားဆီးတာတှေ လုပျဆောငျနတောမြိုးတှေ ရှိတာမှာ ရနျကုနျနဲ့ နီးကပျတဲ့ ပဲခူး တိုငျးမှာတော့ ရနျကုနျဘကျက လာတဲ့ ကားတှေ၊ လူ အဝငျအထှကျတှနေဲ့ ပတျသတျလို့ ကနျ့သတျမှု တခြို့လုပျဖို့ ပွငျဆငျနတေယျလို့ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး စီမံကိနျးနဲ့ ဘဏ်ဍရေးဝနျကွီး ဦးညှနျ့ရှကေ ဗှီအိုအေ ကိုခုလိုပွောပွပါတယျ။
"ပဲခူးကရနျကုနျနဲ့လညျးအရမျးနီးတယျ။ အသှားအလာ ကူးလူးတာလညျးမြားတယျ၊ အဲတော့ဝငျတာထှကျတာကို စီစဈဖို့ကလိုနပွေီပေါ့. အဲတော့ ကနျ့သတျမှုတှလေုပျဖို့တော့ အစိုးရကိုပွောထားတယျ။ အရေးကွီးတာက ပွနျလာတဲ့ ကားတှဆေေးဖွနျးတာ၊ ပွနျလာတဲ့ သူတှကေို ကားဂိတျတှမှော ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုတှေ လုပျတာမြိုးတှေ လုပျသှားဖို့ စီစဉျမှာပါ။"
ဒီပွငျ အစိုးရရုံးစိုကျရာ နပွေညျတျောမှာလညျး အဝငျအထှကျဂိတျတှေ အားလုံးမှာ ကနျြးမာရေး စဈဆေးတာတှေ လုပျဖို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။ နပွေညျတျောကို ဝငျထှကျဂိတျ ၅ နရောဖွဈတဲ့ နပွေညျတျော အမွနျလမျးတိုးဂိတျ (မိုငျ ၂၀၀)၊ တောငျညိုအမွနျလမျးတိုးဂိတျ၊ သာဝတ်ထိဂိတျ၊ တပျကုနျးဂိတျနဲ့ တပျကုနျး-ကငျးသာ ပငျလောငျး လမျးခှဲဂိတျတှမှော စဈဆေးမှာဖွဈပွီး ဝငျထှကျသူတှရေဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုလညျး ကောကျယူမှာဖွဈပါတယျ။
စဈကိုငျးတိုငျးမှာတော့ ကိုရိုနာပိုး ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုကို ကာကှယျထိနျးခြုပျဖို့ ဧပွီ ၁၃ ရကျ ကစလို့ တိုငျးအစိုးရက ညမထှကျရ အမိနျ့ ထုတျလိုကျပါတယျ။ ဒါက ကိုဗဈ ရောဂါမပွနျ့ပှားနိုငျအောငျ လုပျဆောငျတာဖွဈသလို နောကျ ဆကျတှဲ ပွဿနာတှေ မရှိအောငျလို့ ရညျရှယျတာလညျး ဖွဈတယျလို့ စဈကိုငျးတိုငျး တိုငျးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦး မိုးကြျောသူကပွောပါတယျ။
"လကျရှိက ည၁၀နာရီကနေ မနကျ ၄ နာရီထိကို မထှကျရဆိုတာက ဒုစရိုကျသမားတှေ အတှကျပါတယျ။ ကိုဗဈအတှကျ ရညျရှယျတာလညျးပါတယျ။ ဆကျစပျနတေယျ။ ကိုဗဈကို အသုံးခပြွီးဒူစရိုကျတှလေုပျလာ နိုငျတယျ။ ဒီလိုတှဖွေဈလာနိုငျတာမို့ စောစောထိနျးတဲ့ သဘောပါ။"
မွို့ဝငျ မွို့ထှကျတှမှော စဈဆေးမယျ၊ တခွားဒသေကနေ ဝငျရောကျလာရငျ မေးမွနျးပွီး နရေပျလိပျစာ တောငျးယူမယျလို့ စဈကိုငျးတိုငျးအစိုးရအဖှဲ့က ပွောပါတယျ။တိုငျးအတှငျးက ၁၄ ရကျ စောငျ့ကွညျ့စခနျးမှာ နထေိုငျသူတခြို့ စညျးကမျးမလိုကျနာလို့ ထောငျခအြရေးယူတာ ရှိခဲ့တယျလို့ပွောပါတယျ။
တိုငျးအစိုးရရဲ့ ထုတျပွနျခကျြတှကေို မလိုကျနာဘူးဆိုရငျ သဘာဝဘေးအန်တရာယျဥပဒနေဲ့ အရေးယူသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ စဈကိုငျးတိုငျး လုံခွုံရေးနဲ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး က လညျးပွောဆိုထားပါတယျ။
မခေ / ဗှီအိုအေ (မွနျမာပိုငျး)